လက်ဖက်စိမ်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆယ်ချက် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
လက်ဖက်စိမ်းရဲ့ ကောင်းကျိုး ဆယ်ချက်
Tuesday, December 17, 2013 Taunzalat
၁. ကင်ဆာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
၂. ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတယ်။
၃. အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လျှော့ချပေးတယ်။
၄. အရိုးအဆစ်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားမှု့ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
၅. သွေးဖိအားမြင့်တက်မှု့ကို လျှော့ချနိုင်တယ်။
၆. အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ကာကွယ်တယ်။
၈. ရောဂါများဝင်ရောက်မှု့ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။
၉. စိတ်ဖိစီးမှု့များကို လျှော့ချနိုင်တယ်။
၁၀. သွားတွေ ပျက်စီးမှု့ကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်တယ်။